UGigaba ulaxaze isithangami ngenxa 'yomhlangano ophuthumayo' noRamaphosa | isiZulu
UGigaba ulaxaze isithangami ngenxa 'yomhlangano ophuthumayo' noRamaphosa
Angikholwa ukuthi umnotho ubanjwe ngumuntu oyedwa - Gigaba
Kumele avikelwe amalungelo abokufika - UNgqongqoshe
UGigaba uzokhuluma ngodlame oluqhubekayo eGoli nasePitoli
Johannesburg – UNgqongqoshe wezeziMali, uMalusi Gigaba, uselaxaze isithangami sabezindaba ngemuva kokubizelwa “emhlanganweni ophuthumayo” noSekela Mengameli, uCyril Ramaphosa, kusho iHhovisi loMgcinimafa esitatimendeni ngoLwesibili.
UGigaba bekulindeleke ukuthi akhulume kulesi sithangami kulandela umhlangano nemboni yezemisebenzi emahhovisi eNational Economic Development and Labour Council (Nedlac) eRosebank, eGoli.
Lokhu kuyingxenye yezinhlelo zakhe zokudlana indlebe nemboni yezemisebenzi kanye nabamabhizinisi kulandela ukuhlelwa kabusha kweKhabhinethi okuholele ekutheni athathe izintambo kobenguNgqongqoshe wezeziMali, uPravin Gordhan. Isikhala salowo obenguSekela Ngqongqoshe wezeziMali, uMcebisi Jonas, sona savalwa uSfiso Buthelezi.
OLUNYE UDABA: Angikholwa ukuthi umnotho ubanjwe ngumuntu oyedwa - Gigaba
Ngemuva kwalokhu, izinhlangano eziklelisa izinga leminotho yamazwe, okuyi-Standard & Poor’s kanye neFitch, zibe sezehlisela umnotho wakuleli esigabeni esiphansi (junk status) ngemuva kokukhathazeka kokuthi ukushintshwa kobuholi kuzodala ungabazane ngenqubomgomo.
Kodwa-ke uNgqongqoshe uzophinde ahlangane nabatshali bezimali eGoli kanye naseKapa ngasekupheleni kwesonto. Inhloso yale mihlangano kuzobe kuwukuqinisekisa abatshali bezimali ukuthi inqubomgomo ayikakashintshi.
Ngaphambilini iFin24 ibike ukuthi uGigaba uzolibangisa eMelika emizamweni yokubuyisa ukwethenjwa ngabatshalizimali. Kodwa-ke usomabhizinisi ophinde abe ngumholi womkhankaso weSave South Africa, uSipho Pityana, utshele iFin24 ukuthi kusazoba “nenkulumompikiswano enzima” kwabamabhizinisi kanye nabemboni yezemisebenzi mayelana nokuthi bazolweseka yini lolu hambo.
UPityana uthi isinqumo sikaMengameli Jacob Zuma sokunqamula uhambo lukaGordhan kanye noJonas phesheya kwezilwandle saba “ukukhahlelwa emazinyweni" kwabamabhizinisi kanye nabezemisebenzi ababephelezele uGordhan ohambweni lwakhe.
GIS - 19:15:51 PM 14th Avenue / N1 (TL) Ezinye zasemigwaqeni